अमेरीका लैजाने भन्दै करोडौंको ठगी ! « News24 : Premium News Channel
अमेरीका लैजाने भन्दै करोडौंको ठगी !
काठमाडौं । अमेरीका जान भनेपछि धेरै नेपालीहरु जति पैसा पनि खर्च गर्न तयार हुन्छन् । लाखौँ खर्चेर अवैधानिक बाटो अमेरीका जाँदा ठगीनेको संख्या उल्लेख्य छ । सिन्धुपाल्चोककी सीमा लामा पनि कुवेतमा बर्षाै दुख गरेर कमाएको पैसामा ऋण थपेर अमेरीका जाने सुर कसिन् ।
अमेरीकाको ग्रिन कार्ड होल्डर हस्त गौतमले उनलाई चावहीलमा रहेको जिके कन्सल्ट्यान्सीमा जान लगाए । कन्सल्ट्यान्सीका दीपिका तामाङ र गंगारामा लामालाई पैसा बुझाएपछि उनको अमेरीका यात्रा सुरु भयो । करीब २ बर्ष उनलाई कन्सल्ट्यान्सीका सञ्चालक फुलकाजी तामाङले कहिले थाइल्याण्ड कहिले इन्डोनेसिया त कहिले मेक्सीकोमा काम हुँदै छ भन्दै पैसा माग्दै राखिरहेछ । तर २ बर्षको अवधिमा उनको ४२ लाख सकियो तर अ‍ेमरीका छिर्न सकिनन् ।
खोकानाका बबिन महर्जन, रामेछापका लाङवाङ सेर्पा, भरत श्रेष्ठ, राजन श्रेष्ठलाई समेत यही गिरोहले हिम्मत २ चलचित्रको सुटिङको टिम बनाएर लैजाने भन्दै ११ लाख देखि २५ लाख सम्म लिए । पैसा मात्रै लिएनन् । चलचित्र निर्माण गर्ने नक्कली कम्पनी बनाएर टिमकारुपमा नक्कली परिचयपत्र बनाएर विभिन्न देश सम्म पु¥याए ।
रामेछापकै लोमसङ गुरुङलाई सास्ंकृतीक कार्यक्रमको लागि लैजाने भन्दै यही गिरोहले यस्तै प्रक्रियाबाट ४१ लाख लियो । तर न उनि अमेरीका पुगे न पैसा नै फिर्ता भयो । उनिहरुको पैसा बुझ्ने जिके कन्सल्ट्यान्सी अहिले अन्य व्यक्तिको नाममा छ भने दीपिका तामाङ र गंगारामा लामा सम्र्पक विहिन छन् । यसका सञ्चालक फुलकाजी तामाङ फिजिमा छन् । र उनका पार्टनर तथा अमेरीकामा सेटिङ मिलाउने हस्ते गौतम अमेरीकाको ग्रिन कार्ड होल्डर हुन् ।